Global Aawaj | जिम्मेवारीबाट कांग्रेस भाग्दैन: सभापति देउवा जिम्मेवारीबाट कांग्रेस भाग्दैन: सभापति देउवा
चितवन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारीबाट कांग्रेस नभाग्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एकनाथ रानाभाटको १० औँ दिनको पूण्यतिथिमा यहाँ आज आयोजित शोकसभामा उनले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आए कांग्रेस नभाग्ने बताएका हुन् ।
आफू प्रधानमन्त्री भएमा पार्टीलाई फाइदै हुने भन्दै सभापति देउवाले भने, “चिन्ता नलिनुस् रामचन्द्र जी म पार्टीकै मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने अरुको भन्दा आफ्नै पार्टीकालाई फाइदा होला ।” उनले थपे, “तपाई शेरबहादुर जी हुनै हुँदैन भन्ने चाहानुहुन्नजस्तो लाग्छ । मलाई तपाईंको भनाइबाट त्यही बुझियो ।” पौडेललाई सानो चित्त नगर्न र विशाल हृदय राख्न आग्रह गर्दै उनले अबको राजनीतिमा जे आउँछ, त्यो बेहोर्दै जानुपर्छ भने । उनले रानाभाटको राजनीतिक सङ्घर्षको चर्चा गर्दै एक पटक मन्त्री बनाउने आफ्नो चाहाना पूरा नभएको बताए । सो अवसरमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएको भन्दै जुन हैसियतमा संसद्मा छ त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “विपक्षी दलको सही भूमिका कांङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्छ ।”
सानो सङ्ख्यामा संसद्मा भए पनि कांग्रेसको भूमिका ठूलो र जिम्मेवारीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसले सजग र इमान्दार भएर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसके अर्कोपटक लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने गरी संसद्मा बलियो पार्टी बन्ने पनि उनले बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले स्व. एकनाथ रानाभाटले निष्ठावानरुपमा पार्टीमा समर्पण गरेको भन्दै त्यो समर्पण र त्यागको भावना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भने । “आम नेपालीले भरोसा गर्ने ठाउँ भनेको कांग्रेस मात्र रहेको छ” उनले भने, “कांग्रेसले त्यहीअनुसारको आचरण र व्यवहार देखाउनुपर्छ ।”
वरिष्ठ नेता पौडेलले विकृतिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “वास्तवमा कसैले आफ्नो हैसियत र औकातभन्दा बढी आकांक्षा राख्नु महत्वकांक्षा हो र यो विकृति हो ।” लोकतन्त्रमाथि देशी विदेशी षडयन्त्र भइरहेको पनी उनले बताए । कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपालको लोकतन्त्र स्थापनामा रानाभाटले पुर्याएको योगदान सह्रानीय रहेको बताए ।
२१ फाल्गुन, २०७७
आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै कांग्रेस सरकारमा जान्छ: डा. महत
पैसा दिदैँ फोहोर लिदैँ
पैसा दिदैँ फोहोर लिदैँ “महामारी फैलियो, सावधानी छैन” सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने योग ध्यानबाट मानसिक स्फूर्ति खोज्दै पर्यटन व्यवसायी अयोध्या धाममा शोभायात्रासहित मूर्ति राखिने अनलाइन कक्षाका लागि सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने सहरी क्षेत्रका बिद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, संसद अधिवेशन पनि सकियो तराईमा वासन्ती छठ पर्व सम्पन्न आगोले पोलिएका १७१ को नि:शुल्क शल्यक्रिया महाकाली लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग एअरलाइन्सद्वारा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई आइतबार नेप्सेमा ३५.८९ अङ्कको गिरावट मानव बेचबिखन आरोपमा एक पक्राउ स्कूले बालबालिका रुघाखोकी र ज्वरोले ग्रसित कैदिबन्दीद्वारा झुण्डिएर आत्महत्या विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि विद्यालय बन्द मालपोतका कर्मचारीमा कोरोना , सेवा भने निरन्तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दै देशका धेरै ठाउँकाे माैसम खुल्यो, साँझपख पानी पर्न सक्ने पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने